Mega Sic Bo Dib u eegis 2021 | Pragmatic Play | Voordeelcasino.com
Bogga ugu weyn » Ciyaaraha casino ee bilaashka ah » Mega Sic Bo
Ciyaar Mega Sic Bo
Mega Sic Bo Dib u eegista Pragmatic Play
Mega Sic Bo waa mid ciyaarta casino toos ah taasi waxaa sameeyay Pragmatic Play. Bixiyahaan waxaa caan ku ah horumarinta boosaska fiidiyowga oo wali waa bilaw marka ay timaado ciyaaraha loogu talagalay casino tooska ah. Fursadda ayaa ah in kabo cabbirkiisu ka weyn yahay goor dhow loo baahan doono. Uguyaraan hadaad eegto horumarka horumarka fiidiyaha fiidiyowga. Haddii ciyaaraha tooska ah ee tooska ah sidoo kale loo heli karo asal ahaan, tartanka aaggaas wali wuu daawan karaa. Dhacdo, waa Mega Sic Bo ka soo jeeda ciyaarta Sic Bo oo leh Pragmatic Play waxay leedahay leexasho u gaar ah. Markii hore, adeeg bixiyahan durba wuu noolaa roulette oo noolaada blackjack sii daayay sida kulan ee casino toos ah.
Kala duwanaanshaha sharadka
Waa maxay Mega Sic Bo ciyaar ahaan?
Kulankaan waa mid ka soo jeeda Sic Bo. Tani waa ciyaar laadhuu ah oo leh saddex laadhuu. Ujeeddadu waa in horay loo sii saadaaliyo isku darka soo bixi doona ka dib marka saddexda laadhuu la duubo. Sic Bo waxay bixisaa suurtagalnimada in lagu sharfo 52 xulashooyin. Intaa waxaa dheer, kulankaan wuxuu bixiyaa fursad lagu sharaddeeyo natiijooyin badan oo ciyaartoy ah. Kaqeybgalayaasha ciyaarta ayaa dhigeysa sharadooda. Kadibna waxaa jira wax badan Mega Sic Bo leedahay ku dhufo oo meelo bakhtiyaa nasiib ah. Kuwani isku dhufashada waxay suurtagal ka dhigayaan in lagu guuleysto lacag badan. Isku dhufashada ugu sarraysa waa, tusaale ahaan, x1000. Dhacdo, disposes Super Sic Bo of Evolution Gaming sidoo kale ku saabsan isku dhufashada sare ee ciyaarta.
Muxuu miiska ciyaarta u egyahay?
Waxaa jira marti toos ah oo fadhiya gadaasha miiska ciyaarta wareega. Badhtamaha qunsulka Mega Sic Bo waxaad arkeysaa weel dawan oo seddex laadhuus ah. Dhalada dawanka dhalada ayaa u adeegta bedel ahaan koobka laadhuu. Halkii ruxin lahaa koobka laadhuuga, salka dhalada jalaska ayaa gariiraya. Tani waxay keentaa laadhuuga inuu dhaqaaqo. Dhacdadan, doorka ganacsaduhu aad uma weyna. Marti-geliyaha wuxuu leeyahay door xog badan wuxuuna si wada jir ah ugala hadlayaa ciyaarta. Waxaa sidoo kale jira sheeko la heli karo si loola xiriiro martida ama ciyaartoy kale oo kaqeybgale ah. Miiska ciyaarta hoostiisa waxaad ku arki kartaa goob leh xulashooyinka sharadka kala duwan.
Bet, RTP iyo guuleysiga ugu badan
RTP ee Mega Sic Bo waa 95,47% taasina waa macquul ciyaarta tooska ah ee casino oo laadhubo. Sharadka ugu yar ee miiska ciyaarta waa 0,50 yuro, sharadka ugu badan ee lagu ciyaaro casino tooska ah wuxuu yimaadaa 5.000 euro. Waxaad ka ciyaari kartaa Sic Bo Pragmatic Play guuleysto ilaa 1.000 jeer saamigaaga.
Bixintaingen Mega Sic Bo
Waxaa jira lacag bixinno kala duwaningen khusaysaa Mega Sic Bo. Sida hal kasta, meesha aad ku sharraxdo lambar keliya. Haddii dhimashadu u soo baxdo inay leedahay tiradaas, lacag-bixinta waa mid iyo hal. Iyadoo laba laad laadlaad bixintu ka sareyso, oo kala ah labo ilaa hal iyo seddex waa seddex ilaa kow. Laba laadhuu waa lacag bixin kale. Waxaad sharad on isku darka laba laadhuu la bixinta lix ilaa mid. Wadar ahaan 11 ilaa 17 dhibcood, Big wuxuu bixiyaa mid mid.
Tani waxay sidoo kale khuseysaa Small oo wadar ahaan 4 ilaa 10 pips ah iyo Single oo leh hal dhinto la doortay. Saadaal layaableh / xitaa waa suurto gal iyadoo hal ilaa hal mushahar la siinayo. Iyada oo leh labalaab ama labalaab waxaad saadaalinaysaa in laba laadhuhu ay leeyihiin tiro isku mid ah oo dhibco ah. Lacag bixin ah kow iyo toban mid ayaa lagu dabaqayaa tan. Seddex nooc kasta waxaad ku saadaalineysaa in seddex laadhu ay isku mid yihiin. Marka tusaale ahaan in mid kasta oo dhinta uu leeyahay saddex pips. Waxaad markaa ku guuleysan doontaa saamiga soddon illaa mid. Isla saadaashu waxay khuseysaa Triple gaar ah, laakiin waxaad horay u muujineysaa tirada indhaha. Haddii aad si sax ah u qiyaastay, waxaad ku guuleysan doontaa bixinta iyadoo la barbar dhigayo 180 ilaa 1.
Isku dhufashada soo gala ciyaarta ka dib marka sharad la dhigo ayaa loo muujiyaa inay tahay ciyaar gunno ah. Ama dhab ahaan cunsur dheeri ah oo Sic Bo ah dabcan Mega Sic Bo sameeyaa.
Casiniyadee ayaa ciyaarta lagu ciyaari karaa?
Waxaad leedahay xulasho casinos badan haddii aad jeceshahay Mega Sic Bo raba in lacag lagu ciyaaro. Pragmatic Play ayaa ciyaarta ka dhigtay mid toos looga heli karo dhamaan casinos-yada tooska ah ee adeegsada adeeg bixiyahan. Tan macnaheedu waxa weeye, waxyaabo kale, waxaad ikhtiyaar u leedahay Mega Sic Bo te ku ciyaar Boom Casino sida gudaha Frank Casino. Miyaad doorbideysaa inaad ku ciyaarto diiwaangelin la'aan khadka tooska ah ee casino? Kadib lacag dhig Trustly oo tag ciyaartaan tusaale ahaan Nitro Casino (halkan ka daawo Nitro Casino Review) in a Bixi N Play Casino waa.
Ciyaartaan ku ciyaar casinoskan khadka tooska ah
Mega Sic Bo waa soosaarid aad ufiican oo Sic Bo ah oo leh faa iidada ay ku dhuftaan badiyayaashu. Ciyaartu waa marka laga hadlayo khibradda ciyaaraha tooska ah ee kooxdeennu u leedahay Voordeelcasino.com ma ahan mid aad u qurux badan. Waxaan aaminsanahay in tani ay la xiriirto doorka martida, iyo waxyaabo kale. Shinida blackjack of roulette ganacsadaha tooska ahi dabcan waxbadan ayuu ugaga jiraa ciyaarta. Taasi waxba kama beddeleyso xaqiiqda ah in ciyaar toos ah oo casri ah oo laadhuur ah ay dabcan tahay ciyaar bixisa noocyo kala duwan.
In ka badan Mega Sic Bo
Tirada khadadka lacag bixinta
Min / Max sharad
€ 0,50 / € 2500,00
Su'aalaha badanaa la isweydiiyo ee ku saabsan Mega Sic Bo
Muxuu yahay ciyaarta RTP?
Boqolkiiba bixinta Mega Sic Bo waxaa laga yaabaa inaysan u sarreyn sidaad filayso. Magac ahaan, RTP waa 95,47%. Marka loo barbar dhigo tusaale blackjack xitaa waxaa loogu yeeri karaa boqolkiiba waxoogaa celcelis ah oo wax bixin yar. Ka hel wax badan oo ku saabsan Mega Sico Bo dib-u-eegistayada.
🎲 Xagee ka ciyaari karaa?
Mega Sic Bo waxaa loo ciyaari karaa sidii ciyaar toos ah oo casino ah ee khadka tooska ah laga bilaabo 0,50 euro wareeg kasta. Lacagta ugu badan ee lagu xaddidi karo waxay ku egtahay 5.000 euro. Bal eeg annaga dib u eegis ku saabsan Mega Sic Bo Wixii macluumaad dheeraad ah.
The Ciyaarta ma lagu ciyaari karaa dhammaan casinos-ka internetka?
Halkee Pragmatic Play waxay bixisaa software casino for casinos live Mega Sic Bo inuu ciyaaro. Tusaale ahaan Frank Casino sida gudaha Nitro Casino.
Dib-u-eegista ciyaartan waxaa qoray oo qiimeeyay:
Sam waa khabiir ku takhasusay ciyaaraha voordeelcasino.com. Iyada oo uu doorbidayo ciyaaraha fiidiyowga, xiisaha ciyaaraha casino ee internetka looma seegin. Ciyaaraha ugu fiican uguna cusub ayaa Sam waxaad had iyo jeer isku daydaa inaad bixiso dib u eegis fiican oo ku saabsan ciyaarta su'aasha ah.
Midkani Mega Sic Bo dib u eegista waxaa qoray Sam waxaana markii ugu dambeysay la baaray 02-03-2021.
Wax walba oo ku saabsan Ciyaaraha Khabiirka Sam
Kasiinooyinka Onlineka ee Sharciga ah